अर्थ/वाणिज्य Archives -
December 15, 2018 Spnews 1
काठमाडौं । गएको केही महिना पहिले सबैंको मुखमा बसेको नाम हो मीना ढकाल, चर्चा यसकारण कि उनी चर्चित हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलकी कुनैं समय पत्नी थिइन । उनैं चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलसँग सम्बन्ध विदेछ गरेर […]
आज पनि अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर, अन्य देशको कति ? (हेर्नुस पुरा विवरण)
December 3, 2018 Spnews 0
नेपाली बजारमा आज (सोमबार) अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर छ। शुक्रबारको तुलनामा शनिबार ५० पैसाले घटेको अमेरिकी डलरको भाउ आइतबार र सोमबार भने स्थिर रहेको हो। नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार आज अमेरिकी डरलको खरिददर […]
November 28, 2018 Spnews 0
नेपाली बजारमा आज सुन सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला रु ५८ हजारमा कारोवार भएको ‘पहेँलो धातु’ आज घटेर प्रतितोला रु ५७ हजार ६०० मा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । […]
November 20, 2018 Spnews 0
काठमाडौँ ।आज मंगलबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाऊ घटेको छ । सोमबार प्रति तोला ५८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको फाइन गुणस्तरको सुन ४ सय रुपैयाँले घटेर ५८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भयो । […]
October 26, 2018 Spnews 0
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ६ वर्षयताकै उच्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर बलियो बन्नुका साथै सेयर बजारसमेत तल झरेका कारण यसको असर सुन बजारमा परेको हो । सुन शुक्रबार ६० हजार चार सय पुगेको […]
आज सुन चाँदीको मूल्य कति ? हेर्नुहोस् अाजकाे बजारभाउ
October 24, 2018 Spnews 0
काठमाडौँ : दशैँ अगाडीबाटै उकालो लागेको सुनको मूल्य आज बुधबार दशैँको अन्तिम दिन एक सय रुपैयाँ बढेर ६० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तैगरी आज तेजाबी सुन […]
दशैँ नजिकिदै गर्दा सुनको भाउ ह्वात्तै बढ्यो
October 2, 2018 Spnews 0
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउमा बृद्धि हुँदा नेपालमा पनि सुनको मूल्यमा बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ५७ हजार ८ सय रुपैयाँमा […]
दशैको मुखैमा चिनीको मूल्य प्रति किलो १५ रुपैयाँले बढ्यो
September 28, 2018 Spnews 0
काठमाडौँ : सरकारले चिनी आयातमा बन्देज लगाएदेखि बजार मूल्य बढ्दै गएको छ । चाँडपर्व नजिकिंदै गएको अवस्थामा सरकारले बन्देज लगाएको एक सातामा विराटनगरमा चिनीको मूल्य किलोमा १५ रुपैयाँ बढेको हो । सरकारले चिनी आयातमा बन्देज […]
ह्वात्तै घट्यो आज सुनको भाउ ! हेर्नुस आजको भाउ !!
September 24, 2018 Spnews 0
काठमाडौँ । लगातार बढीरहेको सुनको भाउ आज घटेको छ । आज सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ५८ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि ५८ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य अहिले तीन सय रुपैयाँ […]